Ukuqala ehlobo - njalo isikhashana olujabulisayo lolu. Futhi hhayi nje ngoba ilanga, ukushisa kanye iholidi eside elindelwe. Esinye isizathu ukuthi izingane ekugcineni uqede njalo ngonyaka esikoleni. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ingakasondeli inkathi ukukhathazeka - ingane ngathunyelwa ekamu ihlobo. Futhi lapha kubalulekile ukwazi izimiso ezimbalwa ezilula. Yini ukuletha ekamu Holiday Kwatholakala fun, ezithakazelisayo futhi ongasoze?
Into yokuqala ukuhlola ukulungela abantwana eside uhlale kude nabazali. Umnyaka elikhulu, lapho kungenzeka ukuhlela evakashele ekamu, - iminyaka 9-10, ngoba ngokuvamile ngalesi sikhathi sesivele sidlulile othile lithathelwe yezenhlalakahle esikoleni kanye enkulisa. Futhi nje, umntwana usuke engakabi kangaka enamathiselwe abazali bakhe futhi ilungele a ukuzimela ezithile. Nokho, lapha kubalulekile acabangele izici ngamunye izingane.
Ukuze ukuhlola kuqala kungcono ukukhetha ekamu elise hhayi kude kakhulu nasekhaya. Ngaleso sikhathi kuyoba khona ithuba lokuvakashela ngezikhathi ingane yabo. Noma pick it up uma kuba ungakhululekile kakhulu. Ezikhathini ezalandela kakade, ungathumela it in uhambo ezikude, kuhlanganise ulwandle.
Ngaphambi kokuthumela kubalulekile ukuze ufunde mayelana imininingwane ye-ekamu, timphawu, ukutholakala ehhovisi wezokwelapha, abafundisi professional. Ukuze wenze lokhu, ungafunda ukubuyekezwa, ukubuka ngolwazi, ukuxhumana nabazali izingane ukuthi ziphumule kakade.
Kubaluleke ngokufanayo ukuze usethe ingane yakho njengoba kudingeka. Chaza kwakhe lolu hambo njengoba sesiphila Amazing ukutshela, ukuthi kuyoba ezithakazelisayo futhi kumnandi. Mhlawumbe baxoxa ngokuhlangenwe nakho kwabo siqu.
Yini ukuletha ekamu: nezidingo eziyisisekelo
Medical ulwazi kusuka wezingane ukuma № 079 / y. Leli gama lembula zonke izifo eziyinhloko wengane, imigomo kanye neminye imininingwane ebalulekile.
Ingemuva ukungabikho kwezifo ezithathelwanayo.
Ikhophi kamazisi wengane.
Uma ingane ithathwe ekhaya esingaphezu kosuku, zidinga isitifiketi esisha yezifo ezithathelwanayo.
Ngaphezu kwalokho, kufanele azise kusengaphambili mayelana nezici kungenzeka ingane, yokungezwani komzimba kunoma imithi noma imikhiqizo, ukwazisa, uma uyazi ukuthi ukubhukuda, kungakhathaliseki amnike umsebenzi, xoxani ngezinkumbulo ezinhle esimweni sengqondo kungenzeka (uma kukhona izinkinga nontanga). Lokhu kuzokwenza kakhulu lula umsebenzi othisha nabeluleki.
Yini udinga ukuthatha ekamu
Kufanele libe indlela niqaphelisise kukhethwa izikhwama, ekufanele ingane hamba. Kufanele kube ngempela ukhululekile hhayi kakhulu. Kuyinto efiselekayo ukuthi kwakungakabi uyisidala kakhulu ukugwema ukuklolodelwa bezikhali ontanga.
Futhi wamnika ukuba akukho okuseleyo emehlweni enkosi ekamu, kungcono ukwenza uhlu izinto ziye zahlanganiswa. Khona-ke lapho efake izingane zabo kuyoba emuva uhlole uhlu, futhi amathuba okuthi into ziyolibaleka, is kakhulu ziyancipha. Ungase futhi uphawu izingubo noma izinhlamvu zokuqala ezifekethisiwe.
Ngezansi uhlu isampula (lokho ukuthatha ekamu).
Yini okufanele uzithathe ekamu intombazane kanti umfana? kudingeka:
Hat: cap baseball, cap, isigqoko sangempela sasePanama, isikhafu noma Bandana - zonke uvume ukuba baphathe ingane, kodwa isigqoko kufanele kube impoqo.
Underwear e amakhophi amaningana. Inani kuxhomeke ekutheni yena uyothatha ke geza noma esikhwameni ukuze umama wathandana.
Amasokisi (engaba mihlanu ngazimbili).
Izikibha noma izikibha (e isamba 5 izingcezu).
Windbreaker noma ibhantshi ukukhanya (kuncike esimweni sezulu).
Jacket ne ezinemikhono emide (mhlawumbe eziningana).
Manje ake sithi ngokushesha ukuthi kumelwe athathe intombazane ekamu *:
jeans noma izikhindi;
izicathulo, Slippers nezicathulo ezikhululekile;
okuthile nenhle ngoba ema-disco futhi ngezikhathi ezikhethekile;
gum nezinwele Ukugunda;
nightgown noma amaphijama.
Uma kuziwa kulokho ukuthatha ekamu intombazane engu-12 ubudala noma ngaphezulu, kufanele uqaphele ukuthi ungase udinge gaskets, kuhlanganise nsuku zonke.
jeans noma ibhulukwe;
okuthile ngezikhathi ezikhethekile;
Izicathulo ngoba nsuku zonke, flip-flops;
Yini ukuletha enkambeni ovela imikhiqizo kwenhlanzeko? Uhlu simiswe ngalendlela lelandzelako:
Toothpaste kanye shayela.
Soap (kangcono uma isidlo insipho noma isitsha).
Shower gel noma umzimba insipho zokugeza.
amathawula ezimbili - i-ebusweni nasemzimbeni.
Isiqedaphunga (uma ingane isebenzisa).
Okuthile okugeza - insipho noma okokuhlanza.
iphakethe Special noma esikhwameni ukuze izingubo ezingcolile.
Boys kungase kudingeke insingo ahlukene kanye izesekeli ukushefa.
Ngisho ukuthi kungenziwa wayiswa ekamu?
Ukuthunga izesekeli. Njengoba umkhuba ubonisa, ngokwanele of black nochungechunge elimhlophe kwathi elilodwa noma amabili izinaliti.
Kumile. Isidingo sokuthi kube incwajana nangosiba. Kodwa ungathatha kanye amapensela, nemakhilayoni nopende. Njengoba ngokuvamile esisuke labetibambile eminye imisebenzi yokudala, kubalulekile ukudweba amaphosta, ukuhlela imidlalo kanye nemisebenzi. Nokho, kukhona kudingeka eduze ukubuza ukutholakala konke lokhu ekamu mayelana - ngokuvamile iyunithi ngalinye has awayo izesekeli. Nokho, konke lokhu kuyaphela ngokushesha, kuyoba njalo nokuba khona, isibonelo, self-Yesigcilikisha umbala iphepha uyonikeza ingane yesiphathimandla ezithile.
Imithi. Ukuzilapha Yiqiniso, kungcono ukuthi ngeke azenze. Futhi zonke izidakamizwa sina, uma ikhona, kumele inikezwe kudokotela ekamu, ngesineke, njengoba kumele usetshenziswe. Kodwa antiseptics efana iodine nefolishi oluhlaza, amabhandishi, uhala olukhonkiwe kuyinto efiselekayo ukuba ngisithwale.
Kunconywa ukuba ningayeki nge
Ayikho enye indlela. Ngisho iselula akuyona njalo kunesidingo. Imininingwane nabazali kungenzeka ziyiyise ehhovisi ekamu, kodwa khona ifoni ngezinye izikhathi iba nenkinga. Ingane angeke akwazi ukubaleka ke, sihamba yonke imicimbi ekamu. Ngaphezu kwalokho, omakhalekhukhwini kuvamile kakhulu futhi kulula ulahleke, ikakhulukazi phakathi imidlalo ongaphandle emgwaqeni. Ngakho-ke kungcono ukushiya ifoni ekhaya. Kuyefana nasendleleni ithebhulethi yakho, ikhompyutha ephathekayo noma yimuphi omunye izimpahla ezibizayo. Ungakwazi ukuthatha ikhamera, kodwa kuyatuseka ukuthi kwakulula.
Noma yimuphi ezibizayo imigexo izinto, amakha kanye nemali. Izingane akuzona njengoba ehleliwe futhi kalula ungalahlekelwa konke. Ngaphezu kwalokho, abaningi bathambekele ukubukisa into ebizayo, futhi bangakwazi ukweba ke (sekwenzeka). Ngakho-ke, akukho lutho ibiza kakhulu ukuthatha nawe ngeke kukusize ngalutho kuso.
Ukudla, ikakhulukazi okonakalayo. Unganikeza okudliwayo ngesikhathi komgwaqo, kodwa egumbini ayivunyelwe ukugcina ukudla. Abaningi bafisa, wafika ngo-ngempelasonto, aphathe ingane yakho okokwenza esihlwabusayo. Ungakwazi nje nibuthana ukuba nidle, kodwa ukunikeza a hhayi zinkulu. I amakamelo okudlela ngokuvamile ingeyanelisa kakhulu futhi wondla ngokugcwele, nokuthi zazingekho izinkinga Ukudla ekamu libanjwa ukuthenga amathikithi.
Ngaphambi kokuthi uthumele ingane ukuba baphumule, udinga siyihlolisise izikhwama zakhe, jackets kanye emaphaketheni ngokuba khona noma yimuphi "umuntu omdala" izinto. Njengoba abaningi (ikakhulukazi amadala) abantwana bebona ukuthi abazali ikamu linjengoba uhlobo ekukhathazekeni uphinde uzame ukuzama izimpahla ezahlukene akuvumelekile.
izinto Cijela ngensingo eside - sikelo, imimese kanye nanoma yiziphi ezinye izinto yalolu hlobo.
I ezidakayo nezinto zokuhlanza kwezidakamizwa izinto.
Yini enye okudingeka uzicabangele
Ingane kufanele bakwazi uku:
Ukwenza izinqubo inhlanzeko. Self-ukugeza, ukugeza, ukuxubha amazinyo akho, nishaye emakhaleni ami, ugeze izandla zakho ngaphambi kokudla nangemuva kokuya endlini encane.
Ukuze ugcwalise embhedeni wakhe ngemuva kokulala.
Gcina umbhalo walokho izinto zabo - ngobunono yabo eligoqiwe ngaphambi kokulala, ugeze, hang izingubo ezimanzi ukuze ome, izicathulo ahlanzekile.
Yazi yabo ikhabe main - igama, isibongo, patronymic, usuku lokuzalwa, ikheli lasekhaya, inamba yocingo, amagama abazali '.
Izingane kudingeka zazi ukuthi ulethe ekamu ngangokunokwenzeka, futhi lokho - akukho. Noma kunjalo kuyinto Kuhle ukukhumbula ukuthi ngezinye izikhathi abafana ozama uthulule isikhwama sakhe, ulahle kakhulu, futhi le ntombazane, kunalokho - ukuthatha okuningi okungadingekile. Yiqiniso, ngesikhathi ikamu ukuqeqeshwa kufanele ucabangele umbono wengane. Kodwa ngaphambi ababeya ekamu waphinda nje uphinde uhlole konke ohlwini.
Ezokungcebeleka kanye nasemizini yaseGibithe